Qilaafka Golaha Shacabka: Xildhibaanadu ma sharci ayey isku haystaan mise siyaasad? – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, wali kama uusan hadlin qilaafka hareeyey Golaha ee kasoo bilowday War-bixin Miisaaniyadeedka 2018-ka uu Guddiga Maaliyaddu u soo gudbiyey Golaha. Yuusan joogin dalka, laakiin Inuu ismari-waaga taagan ka aamusan yahay ama uusan darteed dib ugu soo noqon dalka, ayey wakiilo badan qabaan iney walaac kale tahay.
Dad badan ayaa u haysta inuu Guddoomiye Mursal ku aragti noqon karo La-taliyihiisa Cabdul-qaadir Maxamed Nuur, oo bartiisa Feysbuugga soo dhigay ineysan kala eryidda Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka sharci ahayn. “Doodda ka dhalatay kala diridda Guddiga Maaliyadda ma waafaqsana Xeer Hoosaadka Golaha” ayuu soo qoray La-taliyaha Mursal.
Isla hadalkaas waxaa mid u muuqan kara inuu jawaab u yahay soo dhigtay iyana barteeda Feysbuugga Wasiirka Dhaliyarada iyo Cayaaraha, Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, oo tiri “Imaanshaha Guddoomiye Mursal waxba kama beddeli karto qoraalka uu ku saxiixan yahay Guddoomiye Kuxugeenka 1-aad ee Golaha Shacabka”. Mursal hadda ma joogo dalka.
Inta badan Xildhibaanada diidan in Guddigaas la kala diro waxay cuksanayaan qodobbo ku qoran Xeer Hoosaadka Golaha, hase ahaatee kuwa ku qanacsan baabi’inta Guddiga Maaliyadda waxay sheeganayaan iney eegayaan danta siyaasadeed ee qaranka. Tusaale, Xildhibaan Mahad Salaad waxa qabaa in haddii ay cidi shaqada ka tageyso ay yihiin Kuxigeennada Guddoomiyaha Golaha Shacabka, isagoo daliishanaya Xeer Hoosaadka Golaha: qodobka 9-aad, farqaddiisa 1-aad, xarafkiisa D.
Qodobkaas waxa uu u qoran yahay “Guddoomiyaha Golaha iyo Labadiisa Kuxigeen waxay xilka ku weyn karaan 1) ku xad-gudubka Shareecada Islaamka, Dastuurka Dalka, Xeer Hoosaadka Golaha ama Shuruucda Qaranka”. Xildhibaan Mahad waxa uu qabaa iney Muudey iyo Cawad qodobadaas mid ama qaar ka mid ah ku xad-gudbeen.
Doodda kala dirista Guddiga Maaliyadda, oo ka soo bilaabatay war-bixin maaliyadeedka dowladda ee ay Golaha dhex keeneen Sabtidii, waxaa ka hadlay Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire, oo rumeysan in War-bixintaas ay siyaasadeysneed. Waxa uu bartiisa Tuwitarka kusoo qoray “Inta badan Xubnaha Guddi Hoosaadka Maaliyadda ee Gollaha Shacabka waxay ka tirsan yihiin kooxaha mucaaradka, waxeyna siyaasadeeyaan waajibkii Gollaha Shacabku u dirsadey”
Xildhibaanku waxa uu weydiisanayaa in eedeynta maaliyadeed ee ay Guddiga Maaliyaddu ku dhoobeen Wasaaradda Maaliyadda iyo Maamulka Gobolka Banaadir ay u baahan tahay caddeymo faahfaahsan, si ciddii gashay loo helo, sida uu hadalka u dhigay. Dooddaas uu qabo Xildhibaan Mire waa midda qeyb ahaan keentay inuu kala jabo Guddiga Maaliyadda, oo qaarkood ku doodayey ineysan war-bixinta waxba ka ogeyn.
Sikastaba, Guddiga Maaliyaddu waxay qabaan iney xaq u lahaayeen iney Xukumadda la xisaabtamaan, oo aysan sharci ahayn in sababtaas darteed loo kala diro, sida ay Xubnaha Guddigaas ku celceliyaan. Xoghayaha Guddigaas, Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, ayaa sheegay iney hayaan dhamaan wadiiqooyinkii ay u mareen barista eedeymaha maaliyeed ee ay ka soo gudbiyeen Xukumadda, “laakiin” buu yiri “si loo duugo arrinkaas (eedeymaha maaliyadeed) ayuu sidaan u sameynayaa Guddoomiye Muudey”. Waxa uu yiri “Guddigu sifa sharciya ayuu ku yimid, sifa sharciyana wuu ku sii shaqeyn doonaa”.
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxay si cad taageero ugu muujineysaa go’aanka lagu burburiyey Guddiga Maaliyadda, waxaana iyada oo u duceeneysa Guddoomiye Muudey ay Feysbuugeeda ku soo dhigtay “Hogaamiyaha Aqlabiyadda Golaha Shacabka”. Hase ahaatee isla waqtigaas wax yar ka hor waxaa uu La-taliyaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Cabdulqaadir Maxamed Nuur, isna ku soo qoray bartiisa bulshada in cidda kaliya ee kala diri karta Guddi Golaha ka tirsan ay tahay Golaha. “Maadaama uu Golaha xilka u dhiibtay, isla Golaha ayaa awood u leh kala diristiisa” ayuu yiri Cabdulqaadir.
Arrintaas taagan darteed, waxaa baaqday inta badan kulamadii Golaha ee todobaadkan dhamaaday. Waxaa laga cabsi qabaa iney sidii loogu talagalay u dhacaan kulamada soo socda todobaadka berri ka bilaabanaya. Waxaana walaacu yahay meesha ay xaaladda qilaafka Golaha Shacabka sal dhigan doonto. Doorka Xukumadda ee arrintan ayaan, marka meel leyska dhigo eedda xildhibaanada, caddeyn.
Waxaa hadda isha lagu hayaa sida uu xaalku noqon doono berri, oo ay tahay inuu dhaco Kulanka ugu soo horreeya ee Golaha Shacabka. Hase ahaatee waxay su’aashu tahay Xildhibaanadu ma sharci ayey isku haystaan mise siyaasad?